‘अरुको आङको जुम्रा देख्ने,आफ्नो आङको भैंसी पनि नदेख्ने ?’ | Jukson
‘अरुको आङको जुम्रा देख्ने, आफ्नो आङको भैंसी पनि नदेख्ने ?’ नेपाली समाजमा प्रचलित भनाई हो यो ।
ख्याल गर्नुहोस् त, जब हामी एकअर्कासँग भेट्छौ । साथीभाई बस्छौ । तब तेस्रो पक्षको बारेमा टिप्पणी गर्न थाल्छौ । ‘फलानो यस्तो, फलानो उस्तो’ भन्दै । हामी उक्त व्यक्तिको नराम्रो कुरा मात्र खेलाइरहेका हुन्छौ, खोतलीरहेका हुन्छौ । अनावश्यक र मनगढन्ते टिकाटिप्पणी गरिरहेका हुन्छौ ।जबकी हामी यसरी जमघट भइरहँदा कहिल्यै तेस्रो व्यक्तिको गुणगान गाउँछौ ? तोस्रो सकारात्मक र राम्रा कुराहरुबारे चर्चा गर्छौ ?
तर कसैलाई सोध्नुहोस्, ‘तिम्रो गल्ती कमजोरी के छन् ?’
हामी अरुको नराम्रो कुरा कति सजिलै पहिल्याउँछौ ? यदि कुनै व्यक्तिको नाम लिएर हामीलाई ‘फलानोको बानी कस्तो छ रु फलानो कस्तो मान्छे हो ?’ भनेर सोधियो भने हामी फटाफट जवाफ दिन थाल्छौ । कनीकुथी उनको गल्ती र कमजोरी औल्याउन थाल्छौ । प्रश्नकर्ताले उनको नकारात्मक कुरा मात्र सोधेका हुँदैनन् । तर, हामी उनको सकारात्मक कुरा भन्दै भन्दैनौ ।
‘म यस्तो गीत गाउँछु’को तेस्रो लभसङ रिलिज
पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको मत गणना अझै सुरु हुन सकेन, सर्वदलिय बैठक जारी